Wafdi uu hogaaminayo Madaxweynaha Soomaaliya oo goor dhow u ambabaxay magaalada Kampala – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
11th May 2014 MAREEG Af Soomaali 0
Mareeg.com-Wafdi uu hogaaminayo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goor dhow u ambabaxay magaalada Kampala ee Caasimada Uganda, kadib casuumaad rasmi ah oo uu Madaxweynuhu ka helay dhigiisa Uganda.
Sida ay sheegayaan wararka wafdiga Madaxweynaha ayaa waxaa ka qaaday garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde diyaarad gaar ah, waxaana socdaalkiisa ku wehliya Wasiirka Gaashaandhiga Maxamed Sheekh Xasan Xaamud, Taliyaha Ciidamada xooga dalka iyo Mas’uuliyiin kale.
Xoghayaha Saxaafada ee Madaxtooyada Shador Haji ayaa sheegay in Madaxweynaha uu safar hal cisho uu ku maqnaanayo magaalada Kampala, isla markaana la kulmi doona Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni.
“Madaxweynaha iyo wafdi uu hogaaminayo oo ay ka mid yihiin Wasiirka Gaashaandhiga, Taliyaha Ciidamada xooga dalka iyo mas’uuliyiin kale ayaa u ambabaxay magaalada Kampala, waa booqasho rasmi ah, Madaxweynuhuu wuxuu la kulmi doonaa dhigiisa Uganda Yoweri Museveni”ayuu yiri Shador Haji.
Labada Madaxweyne ayaa ka wada hadli doona xiriirka labada dal, howl galada Ciidamada AMISOM iyo arrimaha gobolka.
Safarka Madaxweynaha ee dalka Uganda ayaa ku soo aaday, iyadoo Xildhibaanada Baarlamaanka ay ugu baaqeen inuu is casilo, kadib bayaan ka kooban 14 qodob oo ay ka soo saareen todobaadkii hore magaalada Muqdisho